Walaalkii - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Walaalkii
kii walaal u yahay ninka u taajirsan Vietnam ayaa la xiray kiiska musuqmaasuqa ah ee isgaarsiinta, ayaa ku dhawaaqay Wasaaradda Amniga ee Vietnam Saturday, isagoo dhaliyay xoojinta ah ee la-dagaallanka musuqmaasuqa cadaadis gobolka communist.
Pham nhat VU, madaxweynihii hore ee shirkad barnamij aad Audio Visual Global (CCN), oo walaalkeed leeyahay caasimada taasoo ka dhigan tahay in 7,6 billion sida ay sheegtay Forbes, waa kalluunka ugu dambeeyay weyn qabtay ee shabagyo dagaalka musuqmaasuqa.
Mr Vu ayaa lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa isku dayga iibsashada khiyaamooyinka AVG ee shirkadda isgaadhsiinta ee Mobifone, oo kiis la soo xiray sannadkii hore baadhitaan ay dowladdu hoggaaminaysay. Inkasta oo macaamilku uu ku guuldareystey, heshiisku waxa uu lumay ku dhowaad 300 Milyan Dollar oo ah Maaliyadda, sida laga soo xigtay natiijooyinka baaritaanka.
Booliska "go'aansadeen in ay baaraan, xiraan oo ay baaraan guriga Mr. Vu ... oo lagu eedeeyay musuqmaasuq", ayuu yiri Wasaaradda Ammaanka. Lacagta la sheegay in ay bixisay Mr Vu oo laaluush lagu sheegay looma sheegin.
walaalkiisii ​​weynaa Mr. VU Pham nhat Vuong, waa madaxa VinGroup, conglomerate ugu weyn ee dalalka la jiga fasaxa, is-kaashatada raaxo, xarumaha wax laga gato, dukaamada iyo dukaamada ku wareegsan dal.
Laba ka mid ah madaxda sare ee shirkadda Mobifone iyo madaxda sare ee dawladda, oo ay ku jiraan laba wasiir oo isgaarsiineed oo hore loo qabtay, ayaa la xiray sannadkii hore.
Awoodda muxaafidka ah, tan iyo markii uu yimid in 2016 madaxa dalka communist, taasoo keentay a olole lagu beegsanayo madaxda waaweyn mar loo arkaa lama taabtaan ee Vietnam, mid ka mid ah quruumaha ugu musuqmaasuqa badan ee Asia.
Vietnam, oo ah mid ka mid ah dhaqaalaha ugu dhaqaalaha badan ee Aasiyaanka ah, ayaa muddo dheer ku mashquulsanaa musuqmaasuq baahsan. Sida laga soo xigtay ra'yiururinta Transparency International, dalka ayaa kaalinta 117th ku leh dalka 180, oo ka dambeysa Thailand iyo Filibiin, marka la eego musuqmaasuqa.
In kabadan Xubnaha 800.000-da Captagon lagu qabtay Lubnaan
13 April 1975 ee saxaafadda: "Axad madow", dhowr sheekooyin
Merou Seafood, waa la yaab leh
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lorientlejour.com/article/1166287/le-frere-de-lhomme-le-plus-riche-du-vietnam-arrete-pour-corruption.html
Cline Dion wuxuu qoraa hadal
Ninka ugu taajirsan dalka Shiinaha, Jack Ma, ayaa filaya in shaqaalihiisu ay shaqeeyaan saacadaha 72 usbuucii